Muungaab oo xilkaqaadis lagu sameeye sida ay xaqiijisay wasaarada arimaha gudaha – STAR FM SOMALIA
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliya, ayaa waxay xaqiijisay in xilkii laga qaaday Gudoomiyihii Maamulka Gobolka Banaadir & Duqii Magaalada Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Xoghayaha Joogtada Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Yaxye Cali Ibraahim oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa ku dhawaaqay in shaqadii laga eryay Duqii Magaalada Muqdisho.
Xoghayaha oo Saxaafadda u akhriyay Wareegto xilka looga qaaday Muungaab, ayaa sidoo kale akhriyay qayb ka mid ah Wareegtadaasi oo lagu shaaciyay magacaabidda Yuusuf Xuseen Jimcaale (Boorsaani).
Boorsaani waxa uu noqon doonnaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir & Duqa Magaalada Muqdisho, waana nin ka tirsan Ururka Dam Jadiid, oo lala xiriiriyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Yaxye Cali Ibraahim, ayaa sheegay Wasaaradda Arrimaha Gudaha in ay jeedisay, in xilka laga qaado Muungaab. Xil ka qaadista ayaa wuxuu sheegay inay ku codsatay Wasaaradda dokumenti ay u gudbisay Madaxweynaha, isla-markaana uu aqbalay Madaxweynuhu
Yaxye waxa uu diiday in wax tafaasiil ah uu ka bixiyo waxa ku qoran dokumentigaasi, balse waxa uu tibaaxay in Madaxweynuhu uu ku qancay waxa ku qoran, sida uu yiri.
Boorsaani waxaa lagu tilmaamaa ragga ku dhow dhow Madaxweynaha Somaliya, waxa uuna horey kaga tirsanaa Urur Siyaasadeedkii PDP, ee Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu Gudoomiyuhu ka ahaa. Sidoo kalana waxa uu si weyn ugu soo ololeeyay xilligii Madaxweynaha uu u tartamaayay doorashadii Madaxtinimada, ee dalka ka dhacday sanadkii 2012-ka.
Wasiiro ka tirsan maamulka soomaaliland ayaa xilalkii iska casilay